RSS = ရိုးရှင်းသောစုစည်းမှုကိုပြန်လည်စတင်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုအွန်လိုင်းမှဖော်ပြပါ Martech Zone
RSS = ရိုးရှင်းသောစုစည်းမှုကိုပြန်လည်စတင်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုအွန်လိုင်းတွင်ဖော်ပြပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 20, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
၏ကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်များတစ်ခုမှာ Technorati ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာစကားလုံးဖြင့်ရှာဖွေသည်၊ နောက်တစ်ခုကို tag ဖြင့်ရှာဖွေသည်။ သင်ရှာနေသည့်ပစ္စည်းကိုတကယ်ပစ်မှတ်ထားနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ် tag ကိုကြိုက်သည်။
tag ရှာဖွေမှုအတွက်တုန့်ပြန်မှုသည်အလွန်အားကောင်းလှသည်။ သင်လိုအပ်သောအရာကိုရှာဖွေရန်အတွက်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
tags များကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုယူပြီး၊mcse"။
Voila! ဒါဟာ hits ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုထုတ်လုပ်ပါဘူး:
ငါထို့နောက် "အလုပ်" နှင့် "msce" ကိုရှာဖွေ:
ဝိုး! အနည်းငယ်သော hits အပေါ်အဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်! ငါမင်းတို့တွေအကြောင်းမသေချာပေမယ့်ဒီဟာကိုအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့သင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ငါထင်တယ် RSS ကို! ရှေး ဦး စွာသူတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တွင်တင်ပြီးအလုပ်ရှင်များကသူတို့၏ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့တွင်ရာထူးများကိုတင်ထားခြင်းအားဖြင့် ... Technorati သည်အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်များကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီးအလွယ်တကူသိရှိနိုင်သည်။
RSS = ရိုးရှင်းသောစုစည်းမှုကိုပြန်လည်စတင်ပါ။
imbeciles ကဖတ်ရှုဖို့အရူးများကရေးသား ...
မေလ 3, 2007 မှာ 6: 39 AM
မေလ 3, 2007 မှာ 11: 26 AM
ငါ ResumeBay အပေါ်ဥပမာအချို့ပေးခဲ့သည်